विवाह जीवनको महत्वपूर्ण संस्कार हो - विवाह - प्रकाशितः मंसिर ५, २०७३ - नारी
शैलजा अधिकारी, सिइओ, आइइसी ग्रुप
वैवाहिक संस्कार के हो ?
विवाह कुनै पनि समाजका लागि महत्वपूर्ण छ । विश्वका हरेक कुनामा संस्कृति र परम्परा फरक–फरक भए पनि विवाह गर्ने चलन छ । यो जीवनको निकै राम्रो यात्रा हो । जुन यात्रामा फरक–फरक परिवार तथा परिवेशमा हुर्किएका दुई जीवन एक भएर जीवन बिताउने प्रण गर्छन् । पुस्ता बिस्तारका लागि वैवाहिक संस्कार आवश्यक छ । वैवाहिक संस्कारबिना सृष्टि अकल्पनीय हुन्छ ।
एकदम आवश्यक छ । जीवनमा आफ्ना लागि नितान्त नजिकको साथी चाहिन्छ । जीवनमा आफ्ना सुख–दु:ख, हाँसो तथा रोदन बाँड्न सकिन्छ भने त्यो जीवनसाथी नै हो ।
वैवाहिक जीवन सफल बनाउने सूत्र के हो ?
वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बिताउन विवाहलाई सम्झौता मानेर एक–अर्कासँग बार्गेनिङ गर्नु हुँदैन ।
विवाहपछि महिलाहरूको स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ भनिन्छ नि ?
मैले त विवाहपछि अझ बढी स्वतन्त्रता महसुस गरेकी छु । स्वतन्त्रताको बुझाइ पनि फरक–फरक हुन्छ । यसलाई सबैले आ–आफ्नै तरिकाले परिभाषित गर्छन् तर मैले गर्ने परिभाषा तथा बुझाइमा म अझ विवाहपछि स्वतन्त्र भएँ । आमा बन्न पाउनु आफ्नो सन्ततिको हेरचाह गर्न पाउनु जीवनको सबैभन्दा सुखमय घडी हो । सन्तानको हेरचाह गर्दा स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ भन्ने हो भने म त्यसलाई मान्ने पक्षमा छ्रैन । तथापि विवाहअघि आफ्नो जीवनशैली कस्तो छ सोहीअनुसारको जीवनसाथी छनोट गर्नु आवश्यक छ । यति गर्न सके विवाहपछि अझ बढी स्वतन्त्रता अनुभव गर्न सकिन्छ ।
विवाहलाई माया–प्रेमभन्दा पनि जीवनको सम्झौता भनिन्छ होइन ?
विवाह माया–प्रेमको थालनी हो । कसैले विवाहलाई सम्झौता मान्छन् भने उनीहरूले विवाह नगरे हुन्छ । सम्झौता पनि कस्तो प्रकारको हो त्यसमा भर पर्छ । त्यसमा एकले अर्कोका लागि आफ्नो पूरा जीवन दिन्छन् ।